Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Inani lamazwe abethwe lutshintsho olutsha lwe-Omicron olukhulayo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Embindini woloyiko lwehlabathi lonke olubangelwe yi-Omicron, amazwe amaninzi aphinde amisela imiqobo yokuhamba ngelizama ukunciphisa ukusasazeka kwayo.
Okoko ukwahluka kwe-Omicron yentsholongwane ye-COVID-19 yabhaqwa okokuqala eMzantsi Afrika, amazwe amaninzi nangakumbi kwihlabathi jikelele anika ingxelo ngokufika kolu hlobo olutsha kummandla wawo.
Uhlobo olutsha lwe-COVID-19 luchaphazela amayeza njengoko lunokuba ngumngeni kwizitofu zokugonya. Nangona kunjalo, uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ugxininisa ukuba akukabikho bungqina besayensi malunga nokuba zinzulu kangakanani iimpawu zosulelo xa zithelekiswa nezinye iintlobo ze-COVID-19.
Ngeli xesha, phakathi koloyiko lwehlabathi lonke Micron, amazwe amaninzi ayimisele kwakhona imiqathango yohambo ngelinge lokuthintela ukwanda kwayo.
NgoLwesithathu wabona i ilizwe elidibene lasemelika xela icala lokuqala eliqinisekisiweyo lelizwe lokwahluka kwe-Omicron eCalifornia, emva kokuba umhambi, owagonywa ngokupheleleyo, wabuya eMzantsi Afrika ngoNovemba 22. Ilizwe ligqibe ekubeni lifune uvavanyo olubi ngaphakathi kosuku olunye lokuhamba kubo bonke abafikayo, nokuba bayagonywa okanye hayi.
Amagosa asekuhlaleni afumene iimeko ezintathu ze-Omicron, enye kwisiqithi sase-Indian Ocean e-Reunion kunye nezinye ezimbini kwilizwe laseFransi. Kuzo zonke iimeko, abantu babesandul’ ukukhenketha eAfrika.
Namhlanje, i-Indiya ibhengeze iimeko zokuqala eziqinisekisiweyo zelizwe emva kokuba amadoda amabini aseKarnataka evavanywe ukuba anayo emva kokubuya phesheya. Baye babekwa phantsi koqwalaselo ngamagosa karhulumente kwaye lonke unxibelelwano lwabo oluphambili kunye nolwesibini luyalandelwa kwaye luyavavanywa.
Isizwe saseNordic siluqinisekisile usulelo oluninzi lotshintsho lwe-COVID-19, nangona omnye wabo bachaphazelekayo esaziwa ukuba wayekhe waya kwikonsathi enabantu abangama-2,000 XNUMX ngaphambi kovavanyo. Ngelixa umgaqo-nkqubo welizwe lonke ungekaziswa, iDenmark yavala isikolo ebesikrokreleka ngenxa yokoyikela ukuba kunokukhokelela kuqhambuko olubanzi.
Abantu ababini kumasipala wonxweme olusentshona e-Oeygarden bavavanywe ukuba banayo Micron NgoLwesithathu, kuphawulwa iimeko zokuqala zokwahluka eNorway, njengoko lo mmandla unengxaki yosulelo olukhokelele ekuqinisweni kwezithintelo zasekhaya. Okukhathaza ngakumbi amagosa, ilizwe ngoku liphanda iqela elikhulu lamatyala angama-50 anxulunyaniswa netheko leKrisimesi.
Emva kokubuyisela izithintelo ze-COVID-19, kubandakanya nezigunyaziso zemaski, i-Arhente yoKhuseleko lwezeMpilo yase-UK iqinisekisile ukuba, kulo lonke elaseNgilani naseSkotlani, kuchongiwe iimeko ezingama-32 zolwahlulo olutsha, ngelixa iNorthern Ireland kunye neWales zingabhalisanga usulelo olunye olutsha oluguquliweyo. ubunzima.
Abasemagunyeni kwezempilo babhale iimeko ezilithoba eziqinisekisiweyo ze Micron , kunye nosulelo olusibhozo eNew South Wales kunye nolunye kuMmandla oMntla. Amagosa alibeke ilizwe lilumkile, esoyika ukuba kungakho iimeko ezininzi emva kokuba omnye wabantu abosulelayo etyelele kwindawo yokuthenga exakekileyo ngaphambi kokuba avavanywe ukuba unayo.
NgoLwesine, Finlend kwaye Singapho yaqinisekisa ubukho bohlobo olutsha, ngelixa Romaniya nayo yoyika ukuba sele inetyala elinye.